वीरमा ४० करोडको ‘टोमोथेरापी’ मेसिन एक वर्षसम्म जडानै हुन सकेन, ४ वर्षदेखि क्यान्सर उपचार ठप्प – Health Post Nepal
वीरमा ४० करोडको ‘टोमोथेरापी’ मेसिन एक वर्षसम्म जडानै हुन सकेन, ४ वर्षदेखि क्यान्सर उपचार ठप्प
२०७६ पुष २१ गते १८:०२
वीरमा बिरामीलाई खुवाउने खानामा समेत अनियमितता, अयोग्य फर्मलाई टेन्डर
टेकुमा १ दिन, वीर र कान्तिमा ३ दिन, प्रसूतिगृहमा ४ दिन ओपिडी बन्द, आकस्मिक कक्षमार्फत जुनसुकैवेला सेवा
वीर अस्पतालले क्यान्सरोगीको उपचारका लागि एक वर्षअघि ल्याएको अत्याधुनिक उपकरण ‘टोमोथेरापी’ मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा बलम्बुमा थन्किएको छ । जडान गर्ने स्थानको अभावमा एक वर्षअघि काठमाडौं भित्र्याइएको ‘टोमोथेरापी’ मेसिन अहिलेसम्म अस्पताल पुग्न सकेको छैन । अमेरिकी ‘इकुरे’ नामक कम्पनीले उत्पादन तथा विकास गरेको ‘टोमोथेरापी’ उपकरण वीरले गत वर्ष ४० करोडमा खरिद गरेको थियो ।
सप्लायर कम्पनीले ल्याएको मेसिन राख्ने ठाउँ नभएको तथा सुरक्षाका लागि भन्दै अस्पतालले एक वर्षदेखि सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल बलम्बुमा राखेको छ । पुरानो ‘कोबाल्ट’ मेसिन नष्ट गर्न वीरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेको प्रयास विफल हुनु नै नयाँ मेसिन सञ्चालनमा नआउनुको प्रमुख कारण हो । भारतलगायत देशले कोबाल्टलाई नष्ट गर्न असमर्थता दर्साएका हुन् ।
‘टोमोथेरापी’ मेसिन सञ्चालनमा आउन अझै ३ महिना लाग्ने
३ वर्षदेखि बिग्रिएर काम नदिएको पुरानो कोबाल्ट मेसिन हटाउन नसक्दा नयाँ मेसिन सञ्चालनमा समस्या परेको अस्पताल प्रशासनले बताउँदै आएको छ । अवरुद्ध सेवा सञ्चालनका लागि नयाँ अत्याधुनिक प्रविधियुक्त टोमोथेरापी मेसिन महँगो मूल्यमा खरिद गरेको वर्षदिन बितिसक्दा पनि पुरानो कोबाल्ट मेसिन विस्थापन गर्न नसक्दा सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । पुरानो मेसिनको व्यवस्थापनसँगै नयाँ मेसिन सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभावलगायत समस्याका कारण अहिलेसम्म टोमोथेरापी सञ्चालनमा आउन नसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी बताउँछन् ।
‘कोबाल्ट मेसिनमा धेरै विकिरण हुने भएकाले जहाँ पायो त्यहीँ फाल्न मिल्दैन,’ निर्देशक डा. सेन्चुरीले भने, ‘मेसिन खरिद गरेकै देशमा पठाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
नयाँ टोमोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा ल्याउन पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्ट गरेर मात्र पुग्दैन, नयाँ मेसिनका लागि उपयुक्त स्थान पनि बनाउनुपर्छ । नयाँ टोमोथेरापी मेसिन राख्नका लागि बंकरको निर्माण भइरहेकाले सेवा सञ्चालनमा ल्याउन अझै ३ महिना लाग्ने अस्पतालले जनाएको छ ।
पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्ट गर्न भारत असफल, जर्मनी लाने तयारी
वीरले नयाँ मेसिन खरिदको टेन्डर आह्वान गर्दा टेन्डर पार्ने कम्पनीले नै पुरानो कोबाल्ट मेसिन नष्टसमेत गर्नुपर्ने सर्तनामा गराएको थियो । तर, मेसिन नष्ट गर्न भारतमा सम्भव नभएपछि समस्या सिर्जना भएको हो । पछिल्लो समय सो मेसिन जर्मनी लगेर नष्ट गर्ने प्रक्रिया बढाइएको छ ।
कोबाल्ट मेसिनमा अत्यधिक विकिरण हुने भएकाले त्यसको मानव स्वास्थ्यमा पर्ने घातक असरबाट जोगाउन सुरक्षित स्थान र अत्याधुनिक प्रविधिको सहायताले मात्र नष्ट गर्न मिल्ने निर्देशक डा. सेन्चुरी बताउँछन् ।
४ वर्षदेखि रेडियोथेरापी सेवा बन्द, हजारौँ बिरामी निजीको महँगो सेवा लिन बाध्य
२० वर्ष पुरानो कोबाल्ट मेसिन ०७२ सालमा बिग्रिएपछि देशको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा क्यान्सर रोगको उपचारसेवा बन्द छ । विपन्न नागरिकको एक मात्र भरोसा वीरमै वर्षौंदेखि सेवा ठप्प भएपछि हजारौँ बिरामी या त उपचारबाट वञ्चित बनेका छन्, या त निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् ।
कोबाल्ट मेसिन सञ्चालनमा हुँदा वार्षिक १३ सयदेखि १५ सयसम्म क्यान्सरका बिरामीले भर्ना भएर उपचारसेवा लिँदै आएको अस्पतालको तथ्यांक छ । भर्ना भएका क्यान्सररोगीमध्ये ७० प्रतिशतलाई रेडियोथेरापीबाट उपचार गराउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
कहाँ–कहाँ उपलब्ध छ रेडियोथेरापी सेवा ?
नेपालमा हाल काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा मात्र रेडियोथेरापी सेवा उपलब्ध छ । यस्ता उपकरणमार्फत रेडियोथेरापी दिँदा क्यान्सरसेलसँगै अन्य स्वस्थ सेलसमेत मर्ने हुँदा बिरामीमा सिथिलता आउनुका साथै साइडइफेक्ट बढी हुने गरेको छ । वीरमा जडान गर्न लागिएको अत्याधुनिक टोमोथेरापीको भने साइडइफेक्ट तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेकाले उपचारमा ठूलो राहत पुग्ने बताइएको छ ।
तर, उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनै १ वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । अस्पतालले सेवा सुचारु गर्न अझै ३ महिना कुर्नुपर्ने बताइरहँदा बिरामी भने अत्याधुनिक उपकरणमार्फत सस्तो र सुलभ सेवाको आशमा कुरिरहेका छन् ।
नयाँ टोमोथेरापीका विशेषता
टोमोथेरापी रेडिएसन प्रविधिबाट क्यान्सररोगको उपचारमा प्रयोग गरिने अत्याधुनिक उपकरण हो । यसको प्रयोग बिरामीको शरीरमा फैलिएका क्यान्सरका सेलहरू मार्न गरिन्छ । यो अत्याधुनिक उपकरणमा क्यान्सरयुक्त सेललाई मात्र रेडिएसन दिने क्षमता हुन्छ । यसको प्रयोगले क्यान्सरसेल नष्ट हुन्छ, तर अन्य सेललाई असर गर्दैन ।
पहिलेको कोबाल्ट मेसिनमार्फत रेडिएसन दिँदा क्यान्सर सेलसँगै अन्य सेललाई पनि असर गर्ने गरेकोमा नयाँ प्रविधिले जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । टोमोथेरापी उपकरणमार्फत उपचार गर्दा बिरामीमा साइडइफेक्ट कम हुन्छ । टोमोथेरापीमार्फत क्यान्सररोगीको ट्युमरमा धेरै र वरिपरि कम डोजको रेडिएसन दिएर क्यान्सरसेललाई मात्र नष्ट गर्न सकिन्छ । कोबाल्टमार्फत उपचार गर्दा बिरामीलाई रेडिएसन दिएको २ वर्ष नपुगीकन पुनः दिनुहुँदैन भन्ने थियो । तर, टोमोथेरापीमा रेडिएसन दिएको केही समयपछि आवश्यकताअनुसार पुनः दिन सकिन्छ । टोमोथेरापी शल्यट्युमरका लागि बढी उपयोगी हुन्छ । शरीरका सम्पूर्ण भागमा फैलिएका क्यान्सरसेल नष्ट गर्न टोमोथेरापी उपकरण महत्त्वपूर्ण साबित हुँदै आएको छ ।
Tags: टोमोथेरापी, वीर अस्पताल